Mashoko aRoald Dahl Akawedzerwa kuOxford English Dictionary | Zvazvino Zvinyorwa
Rimwe zuva takanga tichitaura tiri Zvazvino Zvinyorwa nezve mamwe mazwi ayo iye Oxford English duramazwi rakaratidza Shakespeare pachake pazvakavimbiswa kuti havapo uye vakaziviswa kuti vaizoita update. Uye nguva shoma yapfuura takakuudza iwe kuti ndinoziva vaive nemakore zana ekuberekwa mushure mekuzvarwa kwemunyori. Kurangarira makore zana, iyo Oxford English Dictionary yakabatanidza mazwi matanhatu matsva akagadzirwa nemunyori Roald Dahl.
Roald Dahl anogara achirangarirwa nekuda kwevanofunga vana nyaya uye nekugadzira vamwe vevanyori vekunyepedzera vanodiwa kwazvo nevaverengi. Mamwe mazita ake ane mukurumbira ndi "Charlie uye Chocolate Fekitori", "Matilda" uye "James neGiant Peach", nyaya kwaakashandisa mutauro wakasarudzika kutsanangura nyika dzemabhuku aya, achitamba nemanzwi uye achikotamisa mitauro yemitauro kugadzira aya mazwi matsva.
Mukuremekedza kuti dai munyori achiri mupenyu nhasi, angadai akasvitsa makore zana, Oxford English Dictionary yakafunga kuwedzera mamwe emazita ane mukurumbira aDhahl nemitsara, kusanganisira pakati pavo vane mukurumbira «Oompa Lumpa». Aya mazwi akaverengerwa muchinyorwa chayo chazvino, icho chave kuwanikwa.
"Kubatanidzwa muDEO (Oxford English Dictionary) yemazwi akati wandei uye akabatanidzwa naRoald Dahl kunoratidza simba rake semunyori uye nehunhu hwake hwakajeka uye hwakasiyana."
"Kune vana vazhinji, mabasa aRoald Dahl haana kungove eimwe yezviitiko zvavo zvekutanga mukuverenga, asiwo kutanga kwavo kuratidzwa pasimba rekusika mitauro."
Pane mazwi matanhatu akaiswa muchinyorwa chazvino cheduramazwi uye ndiwo anotevera:
3 Bhinzi yemunhu
6 Kuroya awa
Izwi iri rinoreva chimwe chinhu chakafanana kana chine hunhu hwemabasa aDahl.
"Kazhinji inoratidzirwa nezvirongwa, eccentric zvakaipa kana zvinosemesa vanhu vakuru, uye dema kana zvinosetsa kuseka."
Tikiti yeGoridhe, kana tikiti regoridhe muSpanish, rinoreva tikiti rakakurumbira rairatidza vana vaCharlie nefekitori yechokoreti avo vakakunda rwendo rwefekitori. Duramazwi reChirungu rinotsanangurwa seinotevera
"Tikiti rinopa muridzi mubayiro wakakosha kana wakasarudzika, ruzivo rwemikana, nezvimwe."
Bhinzi yemunhu kana bhinzi yemunhu muchiSpanish kududzira zvisizvo mazwi "munhu wenyama" (munhu ari muchiSpanish) anowanzo shandiswa nehofori kubva ku "Huru hunhu hwakanaka." Zvisinei, kushandiswa kwekutanga kwe "Human bean" kwakadzokera kumagazini yeBritish satirical Punch, uyo akashandisa mutsara uyu muna 1842.
Zvichida aya ndiwo mazwi ekutanga anouya mupfungwa kana tikataura munyori, mamwe mazwi akagadzirwa kubva mumutambo "Charlie neChocolate Fekitori." IOompa Loompa yaisava chinhu kunze kwevashandi vaWilly Wonka vanogona kuoneka munaGene Wilder muna1971 firimu inoenderana.
Ini handisi kuzoramba kuti zvainge zvakandiomera kunyora iro izwi, ndoda kutaura. Pakutanga izwi iri rakashandiswa mu "The American Theasaurus yeSlang" muna 1942 asi, zvakare, rakava izwi rekutenda zvakare kuburitswa kwe "The Great Good-natured Giant."
Wiching awa kana Hora de las brujas muchiSpanish chirevo chakafanana neicho Shakespeare akashandisa. MuHamlet, munyori akashandisa izwi rekuti "nguva yekuroya" kekutanga, zvisinei, aive Dahl uyo akashandisa iyo diki misiyano yakashandura nguva neawa ndokuita mutsara wakasiyana. Kudzokorora basa, mazwi aya akawanikwa kubva ku "The Great Good-natured Giant" uye, sekureva kweOxford English Dictionary, zvarinoreva zvinotevera:
"Nguva yakakosha pakati pehusiku, apo mwana wese uye munhu wese mukuru ari muhope huru uye zvinhu zvese zvine rima zvinobuda mukuhwanda saka vane nyika yese kwavari."
Uye aya anga ari mazwi matanhatu kana musanganiswa wemazwi achangoburitswa muduramazwi reOxford Chirungu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Roald Dahl Mazwi Akabatanidzwa muOxford English Duramazwi